15 September, 2017 in by Adam Increase
Qalbi-Dhagaxo ku sii jeeda magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya bishii ina dhaaftay safarkiisi kolkuu jaanta dhigay magaaladuu u hodlamayay, duul dabasocday, waxaa hudheel uu ku dagay qaabqafaaleed uga soo qabtay ciidamada maamulka Galmudug oo imikadan ka arrimiya gobol iyo badh min Koonfurta Mudug ilaa soodinta gobolka Galguduud uu kala wadaago Hiiraan. Maleeshiyada maamulka Galmudug goortii ay qabteen C/Kariin waxaa ay islamarkii ay ka beecsadeen dowlladda Itoobiya si ay lacago culus ugu baddashaan, balse nasiibdaradoodu siday u arkaan ruuxa ka baaray iyo busaaradda haysatay cagsigeeda, waxaa loo sheegay inay caasimadda Soomaaliya geeyaan kuna wareejiyaan dowlladda Federaalka Soomaaliya ee uu garwadeenku ka yahay Maxamed C/LLaahi Farmaajo.
Galmudug xaajadeeda lacagdoonka ahi markii ay ku dhiiqootay wiishkuna geesta Itoobiya kaga yeeray, waxaa ay jirdil ugu ciilbixeen C/Kariin Qalbi-Dhagax oo ay intii ay jirdilayeen xitaa ay filin muuqaal ah ka soo duubeen isago xiran fanaanad guduudan iyo macawuus qoorsifays qali ah. Mar haddii iibintii ay gacantooda ku iibsan lahaayeen sarkaalka ONLF ay shaqayn wayday, nimanku waa xariifeen, waa ay u murqaameen odaga iyo dowlladda, waxaana ay dhigeen shax aad u khatar ah, taasoo dad badano indheergaradka waawayn ee Soomaalida ka mid ahi xataa ay ku sidbadeen.
Galmudug bahda madaxweynenimada haysata maamulkaasi, bacdama dowlladda Federaalka ay ka rajaynayeen bilooyin kahor doorashadii Farmaajo in ay ayaku qaadaanayaan JAGADA RA'IISUL U WASAARENIMADA aanay u suuroobin, waxay go'aan ku gaareen in Qalbi-Dhagaxa Itoobiya ay ku amartay inay Muqdisho geeyaan kiiskiisa ay kaga faa'idaystaan suuragalnimada ah labo mide mid. Tusaale:- in Itoobiya marka koobaad taageero buuxda ay kaga helaan addeecidda amarkeeda, iyo inay Muqdisho goorta ay geeyaan Qalbi-Dhagax qaar ka mid ah saraakiisha Federaalka ay la kaashadaan Farmaajo iyo atbaacdiisoo qabardaar ah warba aan ka ahayn ruuxan laga dhiijiyay khasab lagaga dhoofiyo garoonka xarunta dalka deetana shacab iyo Farmaajo dowlladdiisa la iska horkeeno si markaasi madaxweynuhu uu u casilo wasiirka koobaad, kadibna casilaaddaasi Galmudugta sarkaalka ONLF gurigeeda ka soo qabatay lafahana ka garaacday riyadeedii ku taamaysay raysalwasaarenimadu kursigu u hesho, deetana, kolkay ku fariisato ay iska falaqsato sidii horaanba u caadada ahayd xoolaha dadow, sida:- beeraha gobolka SHabellaha-Hoose iyo guryaha Islaameed xoogga ay ku haystaan ee caasimadda iyo hareeraheeda ku yaalla, iyada oo borobagaando HAWIYIISAM AH ay isticmaalayso hab ugu dambayntiina meesha looga turaantureeyo madaxweynaha nafsadiisa waa Farmaajo é, laguna shaabbadeeyo kaarkii casaa 90-meeyadii inuu yahay DAAROOD FAQASH AH.
Sida runta ah, shaxdaasi qaybaheeda hore walaalaha Galmudug waa ay ku guulaysteen, oo Qalbi-Dhagax Muqdisho ayaa la geeyay si qarsoodi ah, iyadoon Madaxweÿne Maxamed C/LLaahi Farmaajo uusan ka warqabin ayaana C/Kariin safaaradda Itoobiya ee ku dhex taal xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya BAASABOOR ITOOBIYAAN AH looga soo sameeyay, si hadhow ciyaartu kolka ay fashilinto loo yiraahdo QALBI-DHAGAX HESHIIS AYUU LA GALAY DOWLLADIISI ITOOBIYA.
Qulub qulubta iyo qulubaageddigaasi intii ay socdeen, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlladda Federaalka daacadda dalka iyo dadka u ah, gaar ahaan aqlabiyadoodu, kuwa AQALKA SARE ayaa nuxnuxda iyo sheekadii ka war helay, waxaana ay orod xafiiskiisi ugu tageen madaxweyne Farmaajo, waxaana ay ku yiraahdeen "Mudane madaxweyne, maka warqabtaa in muwaaddin Soomaaliyeed ee ka tirsan ururka ONLF Gaalkacyo laga soo qabtay haatana Itoobiya khasab loogu wareejin rabo?"
Allaahu mustacaan, xaajadu kolka ay halkaa marayso, Qalbi-Dhagax markii labaad xoog ayaaba mid ka mid ah dayuuradaha qumaatiga u kaca helikobtarka loo yaqaan milatariga oo ay leedahay Itoobiya loogu qaaday magaalada Baydhabo oo haatan maamul ku meel gaar ah u ah dowlladda Koonfurta Soomaaliya, waxaana xubnihii madaxda daacadda isugu jiray xildhibaanada iyo wasiirada farakutiriska ahi, goortay ogaadeen in Qalbi-Dhagax si tuuganimo docda eeriboorka Muqdisho dayuurad Baydhabo u socotay lagu saaray ay tilifoon kula hadleen madaxweynaha Maamulka Koonfureed Shariif Xasan Shiikh Aadan oo xiligaasi ku sugnaa madaxtooyadiisi u dhow garoonka Baydhabo, wuxuuna kalkii la warsaday Qalbi-Dhagax arrintiisi ee uu ku soo warceliyay INUUSAN ARRINTA NINKAASI WAXBA AANU KA QABAN KARIN, halkaana tilifoonkii loo diray Shariif Xasan iyo sheekadiisiba halkaa ku soo afjarantay, kadibna masuuliyintii ay isku dhax waasheen.
Haa, war ku anfaca, haddii wiilkaa Galmudug uu reernimo dowlladda Itoobiya heshiis kula soo galayo, haatan xildhibaanîmada intuu dhigo, Adisababa ha tago, albaabadii ad adkaa Itoobiya dowliga ah, intuu gargaraaco, wasiirada Federaalka Itoobiya heshiis ha la soo galo hadda haddii xaraf laga qorayo, amaba Itoobiya ay shaqsi shacab ah taqaan.
Halkaasi waxaad ka aragtay kana garatay, in wixii dhacaayay asbuucyadii ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliya lagu wareeriyay hooyo iyo aabbe intuba u yihiin qoladan Galmudug oo si kasta nolol afrid ku raadsata shakina aan ku jirin inay yihiin dadka beeciyay jirdilay dhoofshayna C/Kariin Qalbi-Dhagax sarkaalkii jabhadda ONLF ee Itoobiya loo dhoofshay.